Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Lubnaan » Lubnaan ayaa mugdi gashay ka dib markii korontadii dhammaatay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Lubnaan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Laba warshadood oo koronto ayaa shidaalkii ka dhammaaday sababtoo ah dawladdu ma haysan lacag qalaad si ay u siiso bixiyeyaasha tamarta shisheeye. Maraakiibta sida shidaalka iyo gaaska ayaa la sheegay inay diideen inay ku soo xirtaan Lubnaan ilaa lacagtii lagu soo daabuli lahaa lagu sameeyo doolarka Maraykanka.
Xaaladda korontada ayaa durbadiiba ahayd mid aad u liidata Lubnaan ka hor inta aysan dhammaan daminta.
Mas'uuliyiintu waxay isku dayi doonaan inay adeegsadaan kaydka saliidda ee milatariga si ay warshadaha korontadu si ku -meel -gaar ah dib ugu bilaabaan shaqadooda.
Sida laga soo xigtay ilo rasmi ah oo maxalli ah, korontada ka go'day Lubnaan waxay socon kartaa “dhowr maalmood”.
Lubnaan ayaa wajaheysa koronto la’aan baahsan kadib markii labo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee korontada ee dalka lagu qasbay in maanta la xiro, shidaalka oo yaraaday awgii.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Lubnaan, ku dhawaad ​​gebi ahaanba madmadowgii ka jiray waddanka ay dhibaatadu ka dhacday ee ku dhawaad ​​lix milyan ayaa la filayaa inay sii socoto 'maalmo yar'.
Saldhigyada korontada ee Deir Ammar iyo Zahrani ayaa saameeyay 40% korontada Lubnaan, sida uu sheegay hawlwadeenkooda, Electricité Du Liban.
“Shabakadda korontada Lubnaan ayaa gebi ahaanba joojisay shaqada duhurkii maanta, umana badna inay shaqayn doonto illaa Isniinta soo socota, ama dhowr maalmood,” ayuu yiri sarkaalku.
Mas'uuliyiinta dowladda Lubnaan waxay isku dayi doonaan inay adeegsadaan kaydka saliidda ee milatariga si ay warshadaha korontadu si ku -meel -gaar ah dib ugu bilaabaan howlihii, laakiin waxay ka digayaan inaysan taasi dhici doonin mar dhow.
Laba warshadood oo koronto ayaa shidaalkii ka dhammaaday sababtoo ah dawladdu ma haysan lacag qalaad si ay u siiso bixiyeyaasha tamarta shisheeye. Maraakiib siday shidaal iyo gaas ayaa la sheegay inay diideen inay ku soo xirtaan Lubnaan ilaa lacagtii dhalmadooda lagu bixinayey doolarka Maraykanka.
Lacagta Lubnaan ayaa hoos u dhacday 90% tan iyo 2019, iyada oo ay jirto xiisadda dhaqaale, taas oo ay sii xoojisay ismariwaaga siyaasadeed. Kooxaha iska soo horjeeda ayaa awoodi waayay inay dowlad dhisaan 13 -kii bilood ee ka dambeeyay qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay dekedda Beirut, oo kaliya in la helo is -afgarad ka dib markii la ansixiyay golaha wasiirada cusub bishii Sebtember.
Xaaladda korontada ayaa ahayd mid aad u liidata dalka ka hor inta uusan dhammaan damin, iyadoo dadka deegaanku ay awood u yeesheen inay helaan koronto maalintii laba saacadood oo kaliya.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku tiirsanaa matoorrada naaftada ee gaarka loo leeyahay si ay awood ugu siiyaan guryahooda, laakiin qalabka noocaan ah ayaa gabaabsi ku ahaa dalka.